Jeff Nyagah oo si qarsoodi ah u booqday saldhigyada ciidanka Kenya ee Jubaland - Caasimada Online
Home Warar Jeff Nyagah oo si qarsoodi ah u booqday saldhigyada ciidanka Kenya ee...
Jeff Nyagah oo si qarsoodi ah u booqday saldhigyada ciidanka Kenya ee Jubaland
Kismaayo (Caasimadda Online) – Taliyaha qaybta 2-aad ee AMISOM Jeff Nyagah ayaa kormeer labo cishe ah ku tagay Xeryo Ciidamada Kenya ee ku howlgalka Magaca Midowga Afrika ku tagay saldhigyada kala ah Kubiyoow, Raaskaambooni, Kuday, Cabdalla Biroole, Garoonka Diyaaradaha iyo Dekedda Kismaayo oo mas’uul ay ka yihiin sugidda amnigooda.
“Waxaan kaaga mahadcelineynaa adeegga aad u haysaan buslahda, Dadaalkiinu waxay gacan weyn ka geysteen kor u qaadida howlaha dhaqaale, kuwaas oo muhiim u ah helitaanka nabadda. Waxaan wali ku adkeysaneynaa waajibaadka AMISOM iyo geedi socodka nabada ee ka jira, ”ayuu yiri Brigadier Nyagah mar uu la hadlayey askarta.
Brigadier Nyagah ayaa kula dardaarmay ciidamada in ay feejignaan dheeri ah muujiyaan inta ay ku guda jiraan howlahooda shaqo si ay uga hortagaan ugana adkaadaan khataraha ku soo food leh amniga.
Taliyaha wuxuu ku dhiiri geliyey Ciidamada inay sii wadaan xoojinta wada shaqeynta ay la leeyihiin ciidamada amniga ee Soomaaliyeed sida ku cad qorshaha kala guurka Soomaaliya.
Sidoo kale Taliyaha waxa uu la kulmay sarkaal sare oo katirsan Ciidamada Badda Mareykanka oo saldhig ku leh Garoonka Diyaaradaha Kismaayo inkasta oo aan la baahinta xogta wadahadalkooda sida ku xusan warka kasoo baxay AMISOM.
Deegaano iyo degmooyin ka tirsan Gobolada Jubbooyinka ee maamulka Jubbaland ayaa waxaa ku sugan Ciidamo ka tirsan kuwa Kenya kuna howlgalla Magaca AMIOSM, waxaana mararka qaar ay weeraro kala kulmaan Al-Shabaab.